TEKNOOLOJIYADA CUSUB EE ADEEGA BEERALEYDA - WARARKA
Beeralayda Hindiya ayaa la yimid codsi lagu rakibi karo kiniin ama smartphone.
Waxaa loo isticmaalaa si shaqaalaha shaqaalaha ah ay si dhakhso ah u waydiiyaan su'aalaha khabiirada beeraha waxayna helayaan jawaabaha iyaga waqtigooda.
Tani waxay ka caawineysaa habka sahlan ee beeraha iyo qorsheynta shaqada oo dhan.
Kuwa beeralayda ee aan aqoon sida loo qoro, waxaa jira fariin fariin cod ah. Waxaa sidoo kale jira shaqo kuu ogolaaneysa inaad isticmaasho codsiga si loo ogaado qaabka ciidda.
Tani waa mid aad u muhiim ah oo ku haboon si ay u awooddo in ay saxdo oo ay waqtiga u bedesho. Tani waxay si weyn u caawineysaa helitaanka dhalid dheeraad ah.
Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa khariidadaha Google, halkaasoo aad u baahan tahay inaad sheegto goobtaada. Sidoo kale iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah waxaa suurtagal ah in la go'aamiyo sida caafimaadku u yahay dhirta.
Arjiga waa la bixiyaa, laakiin horeyba wuxuu ugu raaxeeyaa dadka caanka ah ee beeralayda Hindiya. Si dhakhso ah ayey u bartaan tiknoolajiyada cusub waxayna ku dabaqayaan faa'iidada naftooda. Si tartiib ah, beeraha ayaa billaabaya inuu sii kordhiyo isticmaalka horumarineed si uu u hagaajiyo geedi socodka koritaanka miraha iyo helitaanka natiijooyin tayo sare leh.
Waxaan sidoo kale heysanaa horumar aad u xiiso badan oo ka jira aaggan. Mustaqbalka dhow waxaan kuu sheegi doonaa tobanka ugu sareeya ee codsiyada moobiilka ugu wanaagsan ee beeralayda iyo beerta u isticmaali karaan shaqadooda.